El Diablo: iro rechokwadi chiso chemutambi Martin Acero (mafoto) - Tamban RELAY
El Diablo: iro rechokwadi mutambi Martin Acero (mafoto)
By bryamangwanabe On June 23, 2020
Kuva mutambi ibasa rakakura. Vazhinji vanoona vanofunga kuti kutamba chinzvimbo mufirimu hunhu hunogamuchirwawo nemuitiri mairi hupenyu chaihwo.
Ipo mutambi anosanganisira chero basa raakapiwa. Yakaipa, ine mutsa, inonyara, inotsvedza, inozvitutumadza, yakapfuma kana murombo. Iwo mutemo wecinema.
Nekudaro, Martin Acero ane zita chairo Miguel Varroni akaridza chinzvimbo chemurume anozvitutumadza, anoda chinzvimbo uye anopenga "El Diablo". Izvo zvakashatisa mufananidzo wake pakati pevaoni. Asi mutambi wacho akafanana chaizvo nehupenyu chaihwo here?
Novelas: EL DIABLO EPISODE 69 MUFRENCH Ngirozi Yakaponeswa Kubva…
Miguel Varroni nokudaro akabvuma mubvunzurudzo kuti haana kushata: "Handisi munhu akaipa iyeye waunofunga kuti uri." Ini ndaingotamba zvangu tambo uye ndinofunga ndakutamba nemazvo. Ndine mukadzi wandinodisisa uye wandinoremekedza uye pasina chinhu munyika handisi kuzomusiyira mumwe ”.
Iyo mutambi mukuru ave akaroora kubvira 1997. Ah! Kuti chitarisiko chiri kurasika. Akaroora Catherine Siachoque anova amai vaCatalina uye mukadzi waAlbéro mune akateedzana "Catalina". Ah izvo, makore makumi mana ehupenyu pamwe chete kune murume akaipa kudaro! Wow izvi kuongorora…
Chinyorwa ichi chakatanga kuoneka pa: https://afriqueshowbiz.com/telenovelas-de-la-serie-el-diablo-le-vrai-visage-de-lacteur-martin-acero-photos/
COVID-19: ZveMedhiya Gadzira kushandisa yepamhepo mapuratifomu kupa masevhisi
AU inomisa zviitiko muSouth Sudan pamadhora mazana mapfumbamwe emadhora
Novelas: FATMAGÜL SUMMARY EPISODE 62 Selim na Erdogan vanorwiswa nevano…